Kismaayo News » Kenya oo looga cabsi qabo dagaal sokeeye
Kenya oo looga cabsi qabo dagaal sokeeye
Kn: Ayadoo la filaayo inay doorashada madaxweyne ee ku celiska ah ka dhacdo dalka Kenya maalinta khamiista oo bari ah ayaa waxaa jira cabsi isa soo taraysa oo ku aadan in dalkaasi uu mar kale ka dhaco dagaalo lagu hoobto uu u dhexeeya qabaa’illada kala taabacsan madaxweyne Uhuru iyo hogaamiyaha mucaaradka ee Odinga.
Walaaca laga qabo in dagaal ka dhaco Kenya waxay dhalisay in dawladda Maraykanku dalkaasi uga yeertaan safiir koodii u fadhiyay, halka Qaramada Midoobay ay todobaad ka hor joojisay hawlihii ay dalkaasi ka fulin jirtay. Arinta waa sii murginaaya hogaamiyaha mucaaradka, Odinga oo qaadacay inuu ka qayb galo doorashada ku celiska ah, kaaga sii daranee hadal uu manta jeediyayna ku dhawaaqay ‘dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta’. Wuxuu ku goodiyay Odinga “hadii aan dadku cadaalad helin, ha ogaato dawladduna inaysan nabad helaynin”.
Dalalka Reer Galbeedka ayaa aad uga dayrinaya rajada ay ka qabaan inuu dalka Kenya si nabad ah uGu gudbo hogaan raali laga yahay oo dalka haga sanadaha soo socda, waxayna u muuqataa inuusan Uhuru dhag jalaq u siinayn khataraha soo muuqda halka Odingana uusan ogolaan doonin inuu aqbalo wax ka yar inuu dalka asagu hogaamiyo.
Guud ahaan dalka dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isu socodka magaalooyinka ayaa hakad ku yimid cabsi ay dadku ka qabaan duufaanno colaadeed oo dalka u horseedi kara dagaal sokeeye. Hadiiba ay rabshado ka dhacaan Kenya, dadka ugu horeeya ee saamaynta uGu daran ay ku yeelanayso waa Soomaalida oo ganacsi aad u xoogan ku leh guud ahaan gobolada Kenya, waxaana jira dad badan oo Kenyaan ah oo bishinta u qaniinsan inay boobaan ganacsigaasi.